Kani waa fiidiyowgii bateriga MagSafe qarxay | Wararka IPhone
Isbuucaan Kanaalka YouTube Charger Lab ayaa u labbistay sidii iFixit si toos ah naloo tuso muuqaalka qarxay ee batteriga Apple, Magsafe. Si toos ah aan ugu sii wadno qodobkaan waa inaan dhahno tan waxaa sameyn kara oo kaliya khubarada ku xeel dheer arimahan, waligaa ha isku dayin inaad furto batteriga si aad u aragto gudihiisa si kasta oo ay u muuqan karto sahal. Intaa waxaa dheer, si macquul ah baytariga Apple markii la furay mar dambe looma isticmaali karo in lagu dalaco iPhone kasta.
Fiidiyowga kanaalka YouTube Xeedho xeedho taas oo ay ku muujinayso gudaha baytarigan, si macquul ah waa Ingiriisi iyo waxaad bilaabi kartaa inaad aragto gudaha batteriga laga bilaabo daqiiqada 3:00:
Waxaa jira laba garbood oo lacag bixin ah iyo giraan magnet ah oo u oggolaanaya qabashada saxda ah ee iPhone 12, waxaad ku arki kartaa laba batariyaal gudaha ah oo isku xiran oo bixiya qiyaastii saacadaha 11,13 watt iyo 7,62 ee danab. Waxa kale oo xiiso leh in la arko in dhabarka thisMagSafe Battery uu ku yaal saxan bir weyn oo leh naqshad la mid ah saxanka taas oo u oggolaanaysa kala-baxa wanaagsan ee kuleylka marka aan lacag ku shubeyno qalabka.
Caqli ahaan dhamaantiis qaybaha gudaha ee baytarigan waa tayo sare iyo teknolojiyad, dhexdeeda waxaan ku arki karnaa sacab wanaagsan oo microchips gudaha ah, kaliya ma ahan batariga banaanka. Batarigan banaanka waxaa laga heli karaa 109 XNUMX ee bogga AppleHaddii ay u qalanto iyo in kale, taasi adiga ayey ku xiran tahay inaad go’aansato.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Kani waa fiidiyowga qarxay ee bateriga MagSafe
Nomad Leather Loop, minimalism iyo tayo ee AirTags-kaaga